नुवाकोट, १७ असार । नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले नेपाल पर्वतीय पर्यटनका लागि दुनियाँकै सबैभन्दा उर्वर रहेको बताएका छन् । नेपाल पर्वतारोहण संघद्वारा आज नुवाकोटको ककनी...
reportersnepal.com . ११ मिनेट अघि पूरा समाचार पढनुहोस
काठमाडौं, १७ असार : नेपाली फोटो पत्रकारहरुको छाता संगठन राष्ट्रिय फोटो पत्रकार समूह (एनएफपिजे)ले भारतीय फोटोग्राफर दुर्लभ रोय चौधरीलाई छुटाउन आर्थिक संकलन गर्ने भएको छ । खोटा मुद्रा बोकेको अभियोगमा...
reportersnepal.com . ३९ मिनेट अघि पूरा समाचार पढनुहोस
काठमाडौं, १७ असार । स्वतन्त्र उम्मेदवारहरु सगठित रुपमा आक्रामक रुपमा बढेपछि राजनीतिमा नयाँ तरङ्गहरु आउन थालेका छन् । यसको असर दलहरुमा परिरहेको छ । परम्परागत दलका शिर्ष नेताहरु निर्दलीयताको अभ्यास ...
काठमाडौँ,१७ असार । बाँकेमा तीन जनामा कोरोना सङ्क्रमण पुष्टि भएको छ । भेरी अस्पताल, नेपालगञ्जमा शङ्कास्पद तीन नमूनाको पिसिआर परीक्षण गर्दा आज उनीहरुमा सङ्क्रमण देखिएको जिल्ला कोभिड–१९ सङ्कट व्यवस्था...
काठमाडौँ,१७ असार । स्थानीय सञ्चार नीतिमा समेटिनुपर्ने विषयहरूका बारेमा आज शिवसताक्षी नगरपालिकास्थित दुधेमा पत्रकारसँग अन्तरक्रिया कार्यक्रम गरिएको छ । नेपाल पत्रकार महासङ्घ जिल्ला शाखाको आयोजना र ...
काठमाडौं, १७ असार । नेपालका लागि नवनियुक्त राजदूत नवीन श्रीवास्तवले ओहदारको प्रमाणपत्र राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी समक्ष पेश गरेपछि औपचारिक कार्य सुरु गरिसकेका छन् । उनले १६ असारमै प्रधानमन्त्री ...
काठमाडौँ,१७ असार । काठमाडौँ उपत्यकामा आज थप तीन जनामा हैजा देखिएको छ । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जारी गरेको बुलेटिनका अनुसार यो सङ्ख्यासँगै अहिलेसम्म उपत्यकामा १७ जनामा हैजा पुष्टि भएको छ...
असार १७, काठमाडौं । सूचना तथा सञ्चार प्रविधि क्षेत्रको प्रतिष्ठित अवार्डको रूपमा परिचित आइसिटी अवार्डको सातौं संस्करणको अनलाइन नोमिनेशन (आवेदन) आज जुलाई १ देखि शुरु भएको छ । लिभिङ विथ आइसिटीको आयो...
काठमाडौं, १७ असार । बैंक अफ काठमाण्डू लिमिटेड र युरोपा फिटनेस सेन्टर बिच छ्ट दिने सम्झौता भएको छ। बैंक र सेन्टरबीच बैंकको डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड तथा मोबाइल बैंकिङ्ग बाट क्यूआर कोड स्क्यान गरी भ...
बखतियार अलि । नवनिर्वाचित जिल्ला समन्वय समिति सर्लाहीका प्रमुख कौशल सिंह एक्सनमा उत्रिएका छन् । सर्लाहीका २० वटै पालिकासंग आर्थिक बर्ष २०७८र०७९ मा गरेको बिकास निर्माण तथा बितिय ब्यबस्थापनको प्रगति ...
काठमाडौं, १७ असार । जनता समाजवादी पार्टी, नेपालका संघीय परिषद् अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराई आन्तरिक छलफलमा जुटेका छन् । पार्टी विभाजनको मुखमा पुगेको चर्चाका बीच उनी आफूनिकट नेताहरुसँग आन्तरिक परामर्...
एजेन्सी, १७ असार । आफ्नो मनपर्ने कलाकारको जीवनका बारेमा जान्न जोकोही फ्यान उत्सुक हुन्छन् । फ्यानहरुलाई कलाकारहरूले कुन खानेकुराको सौखिन छन् भन्ने कुरामा झन चासो राख्छन् । यहाँ बलिउडका लोकप्रिय कला...
काठमाडौँ,१७ असार । शुक्लाफाँटा नगरपालिकामा आव ०७८÷७९ मा भएका विकास निर्माणका कार्य सन्तोषजनक नभएको आज आयोजित सार्वजनिक सुनुवाई र्कार्यक्रमका सहभागीहरुले व्यक्त गरेका छन् । भौतिक पूर्वाधार निर्माणका...
काठमाडौं, १७ असार । बागमती प्रदेश कांग्रेस संसदीय दलका नेता इन्द्र बानियाँले प्रदेशमा सरकार परिवर्तनले सत्तारुढ पाँच दलीय गठबन्धनलाई कुनै असर नगर्ने बताएका छन् । बागमती प्रदेश र सुदूरपश्चिम प्रदेश...
reportersnepal.com . ३ घण्टा अघि पूरा समाचार पढनुहोस
काठमाडौं, १७ असार । मोरङमा स्कुल बसको ठक्करबाट २ बालबालिकाको मृत्यु भएको छ । विद्यालय छुट्टी भएर घर जान तयार भएका बेला आफ्नै विद्यालयको बसले ठक्कर दिएर माउण्ट मकालु बोर्डिङ स्कुलका २ विद्यार्थीको म...
काठमाडौं, १७ असार । अन्तर्राष्ट्रिय कृष्ण भावनामृत संघ (स्कोन) को आयोजनामा आज काठमाडौंमा जगन्नाथ रथयात्रा गरिएको छ । उक्त रथयात्राको उद्घाटन भने राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गरेकी हुन् । सुन्धार...
काठमाडौँ, १७ असार । पर्यटक तान्न वा अवलोकनका लागि खासै नयाँ कुरा चाहिँदैन । तर नौलो अनि पृथक हुन आवश्यक रहेको इलाम बजार नजिकै निर्माण गरिएको हात हेर्न जाने पर्यटकबाट नै पुष्टि हुन्छ ।जमिनबाट ठाडो प...
रवि लामिछानेको पार्टी ‘राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी’ निर्वाचन आयोगमा दर्ता, चुनाव चिन्हपनि घण्टी नै पाए
काठमाडौं, १७ असार । निर्वाचन आयोगले रवि लामिछाने नेतृत्वको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी दर्ता गरेको छ । पार्टी घोषणा भएकै दिन लामिछाने निर्वाचन आयोग दल दर्ताको लागि पुगेका थिए । पार्टीले प्रस्ताव गरे...
कानुनको परिपालना गराउन कानुनी शिक्षाको अहम् भुमिका : राष्ट्रपति भण्डारी
काठमाडौँ,१७ असार । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले कानुनी शिक्षा नै कानुनी शासन स्थापनाका लागि प्रमुख आधार भएकाले संविधान र कानुनका बारेमा समाजमा जनचेतना अभिवृद्धि गराई कानुनको परिपालना गराउन विश्व...
समाजवादी प्रेस संगठनको मधेश प्रदेशको विस्तारीत बैठक सम्पन्न
पर्सा,असार १७ । समाजवादी प्रेस संगठन मधेश प्रदेशको विस्तारीत वैठक सम्पन्न भएको छ । भेलाले मधेश प्रदेशमा संगठनको अवस्थाको बारेमा जानकारी गराइएको थियो । भेलाले मधेश प्रदेश अन्तर्गतका ८ वटा जिल्लाको ...
काठमाडौँ,१७ असार । कैलारी गाउँपालिका–६ स्थित गौकन्द्री खोलामा केही दिनअघि साथीहरुसँग पौडी खेल्ने क्रममा डुबी बेपत्ता भएका एक बालकको शव आज फेला परेको छ । धनगढी उपमहानगरपालिका–१९ जे गाउँका दीपक विकक...
काठमाडौं, १७ असार । नेत्रविक्रम चन्द विप्लव निकट अखिल क्रान्तिकारीले आज जनक शिक्षा सामाग्रीका प्रबन्ध निर्देशक अनिल झालाई कालोमोसो दलेको छन् । पुस्तक छपाइमा लापरबाही गरेको भन्दै झालाई कालोमोसो दले...
काठमाडौं, १७ असार । सहज भनेर चिनिने नेपाल कृषि बजार विकास कार्यक्रम दोस्रो चरणद्वारा जुन २८, २०२२ मा एक सम्झौता हस्ताक्षर कार्यक्रममा सहज च्यालेन्ज फन्ड राउण्ड १ का विजेताहरूको घोषणा गरिएको छ । १८...
काठमाडौँ, १८ असार । सरकारले लगातार दश वर्षदेखि सार्वजनिक गर्दै आएको तथ्य र तथ्याङ्कले चामलको परनिर्भरता अकासिएको पुष्टि हुन्छ । आर्थिक वर्ष २०६९÷७० मा करिब रु २० अर्बको चामल आयात भएको थियो । १० वर...
काठमाडौं, १७ असार । सत्तारूढ पाँच दलीय गठबन्धनमा बाग्मती र सुदुरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री परिवर्तन गर्नेगरि छलफल सुरु भएको छ । अहिले नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्रले बाग्मती प्रदेशका मुख्यमन्...
काठमाडौं, १७ असार । सानिमा बैंक लिमिटेडले थप नयाँ शाखा विस्तार गरेको छ। बैंकले आजदेखि तारकेश्वर नगरपालिका वडा नं. ११ नेपालटारमा बैंक शाखा स्थापना गरी बैंकिङ्ग सेवा विस्तार गरेको हो । उक्त शाखाको स...
काठमाडौँ,१७ असार । धुञ्चे–रसुवागढी खण्डमा वर्षायाममा हुने सम्भावित राजमार्गको अवरोध हटाउन डोजरको व्यवस्था गरिएको छ । यसबाट रसुवागढी नाकाबाट आयात भएका चिनियाँ सामग्री सहज रूपले गन्तव्य पठाउन सहयोग प...
काठमाडौं, १७ असार । इंग्ल्यान्ड क्रिकेट बोर्ड (इसीबी)ले जस बट्लरलाई एक दिवसीय र टी–२० क्रिकेट टोलीको कप्तानीको जिम्मेवारी दिएको छ । विश्वकप विजेता इयोन मोर्गानले बुधबार पद छोडेपछि विकेटकिपर ब्याटर ...
काठमाडौं, १७ असार । कैलालीमा एक बालकको शव फेला परेको छ । गौकन्द्री खोलामा ११ वर्षीय निखिल विकको शव खोलामा फेला परेको कैलाली प्रहरीले जनाएको छ । विक बुधबार दिउँसो साथीहरुसँग खोलामा नुहाउन गएका बेला...
काठमाडौं, १७ असार । साताको कारोबारको अन्तिम दिन आज शेयर बजारमा सामान्य अंकको गिरावट आएको छ । शुक्रबार २ घण्टामात्र कारोबार हुने शेयर बजारमा ८ अंकको गिरावट आएको हो आज नेप्से परिसुचक ८ दशमलव ८७ अंकल...
खोटाङ, १७ असार । खोटाङमा ५ वर्षकी नाबालिकालाई जबर्जस्ती करणी गर्ने किशोर पक्राउ परेका छन् । गत १४ असारमा नाबालिकालाई बाख्राको खोरमा लगेर मुख थुनेर जबर्जस्ती करणी गर्ने केपिलासगढी गाउँपालिका-४ बाक्स...
reportersnepal.com . ५ घण्टा अघि पूरा समाचार पढनुहोस
काठमाडौँ,१७ असार । यहाँको मरिण गाउँपालिका–३ मा झोलुङ्गे पुलको निर्माण सुरु भएको छ । एक सय २० मिटर लम्बाइ भएको झोलुङ्गे पुल निर्माण सुरु भएपछि वडा नं ३ को सिन्नेरी बरुण र भित्री भलायोका स्थानीय बासि...
काठमाडौं, १७ असार । नबिल बैंक लिमिटेडका नवनियुक्त प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ज्ञानेन्द्र प्रसाद ढुंगानाले पदभार ग्रहण गरेका छन् । ढुंगानाले आज असार १७ गते शुक्रबार पदभार ग्रहण गरेका हुन् । बैंकको असा...
काठमाडौँ,१७ असार । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सुन्धारामा पुगेर जगन्नाथ रथयात्राको अवलोकन गरेका छन् । नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय कृष्णभावनामृत सङ्घ (स्कोन नेपाल) ले आयोजना गरेको सो रथयात्रामा सरिक ह...
नेपालगञ्ज, १७ असार । बाँके प्रहरीले मालबाहक कन्टेनरबाट २५० बोरा अफिम ब्राण्डको पोष्टर दाना (अफिम सिड) नियन्त्रणमा लिएर अनुसन्धान सुरु गरेको छ । नेपालगञ्जबाट जमुनहा नाका हुदै भारतको रुपैडिहातर्फ गइ...
काठमाडौं, १७ असार । नेपाल ल क्याम्पसको स्वर्ण सम्मानबाट एमाले उपाध्यक्ष सुवास नेम्वाङ र प्राध्यापक डा सूर्य सुवेदी सम्मानित भएका छन् । नेपाल ल क्याम्पको स्थापना दिवसको अवसरमा शुक्रबार आयोजित कार्य...
‘विपदबाट हुने क्षतिलाई न्यूनीकरण गर्न आवश्यक’
काठमाडौँ,१७ असार । मधेस प्रदेशका मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले विपदबाट हुने धनजनको क्षतिलाई न्यूनीकरण गर्न तीनै तहका सरकारबीच समन्वय र सहकार्य आवश्यक रहेको बताएका छन् । धनुषा र सिरहाको सिमानामा पर्न...